Nagarik Shukrabar - प्रियंकाको गोप्य थ्योरी
शुक्रबार, २९ कार्तिक २०७६, ०३ : ३१
प्रियंकाको गोप्य थ्योरी
शुक्रबार, २४ साउन २०७६, १२ : ३७ | शुक्रवार
दर्जनौँ सफल फिल्म दिँदादिँदै एउटा फिल्म अलि कमजोर भयो कि ओरालो यात्रा शुरु भइहाल्छ सेलिब्रिटीका। निरुता सिंहलाई नै हेर्नुस् त ! कस्ता कस्ता दामी फिल्म आए उनका। एक से एक हिट। मास्टर स्ट्रोक मानिने ‘दर्पण छायाँ’की अभिनेत्री।
अहिले उनी हुनु र नहुनुबीच कुनै भिन्नतै छैन। दाल, भात, तरकारीमा हल्का लाउड अभिनय के गरेकी थिइन्, दमदार कमब्याकको उनको प्रयास खेरै गयो। उमेर फिल्म क्षेत्रबाट अवकासै लिनुपर्ने पनि भइसकेको छैन तैपनि खै, टिक्न सकसै छ उनलाई।
कसै कसैको त भाग्य नै गजब। डोको दुध दुहुँदा पनि अडिने खालको क्या ! प्रियंका कार्कीलाई हेरौँ न। उनका फिल्म ब्याक टु ब्याक फ्लप। प्रारम्भमा ‘थ्री लभर्स’ होस् या ‘कलिउड’, ‘मिसन पैसा’ या ‘माला’ अथवा ‘सुन्तली’। दुई दर्जन बढी फिल्ममा अभिनय गरिसके पनि हिटको खातै खुलेको छैन। तैपनि उनको मार्केट उस्तै।
माल्थसको जनसंख्याको सिद्धान्तले भन्छ, ‘जुनसुकैको उत्पादनको सफलताको क्रम एकै खालको हुन्न। उच्च रेखामा पुगेपछि तल झर्छ नै। अनि कुनै विन्दुमा आएर अडिन्छ र फेरि उचाई लिन थाल्छ।’
यसलाई व्यक्तिको जीवन यात्रासँग दाँजेर हे-यो भने पनि उस्तै देखिन्छ। कसैको पनि जीवनयात्रा एकै खालको हुन्न। सफलताको उचाईमा पुगेकाहरुको पनि ओरालो यात्रा शुरु हुन्छ। तर प्रियंकाको यात्रा हेर्ने हो भने त माल्थसको थ्योरी नि फ्लप ! अचम्म हैन त?
कहिलेकाहीँ ठेस नलाग्ने हैन तर सम्हालिन जानेकी छन् उनले। उनको पहिलो झट्का पहिलो वैवाहिक जीवन फ्लप हुनु थियो। धेरै टिकेन पहिलो विवाह, डिभोर्स भइहाल्यो।
कहिले कोसँग, कहिले कोसँग नाम जोडिए पनि ओपन भने भएन उनको सम्बन्ध। आयुष्मान देशराज जोशीसँगको अफेयर सार्वजनिक हुँदा धेरै छक्क परेका थिए। हिजोको ‘भाइ’लाई आज प्रेमी बनाउने भन्दै हल्का क्रिटिसाइज पनि भएकै हो। तैपनि न उनको नेममा केही असर प-यो, न फेममा।
उल्टो डिमान्डेड कपल पो बनिदिए दुवै। प्रेम सम्बन्ध ओपन भएको वर्षको भ्यालेन्टाइन डेमा विक्ली ट्याब्लोइड पत्रिकाहरुलाई चक्मा दिएर सबैमा उही जोडी छायो। त्यसको प्रभाव मार्केटमा नपर्ने कुरै थिएन, प-यो। अनि त फिल्ममा सँगै, म्युजिक भिडियोमा पनि सँगै। प्रेमको चर्चाले आम्दानीको स्रोत पो बढाइदियो।
भोड्काले सेक्सी क्यालेन्डर निकाल्नु परो भने पनि प्रियंका, कुनै होटलले इन्स्टातिर यसो आफ्नो प्रमोशन गराउनु प-यो प्रियंका, विज्ञापन निर्माता पनि उनकै पछि। एकसे एक फिल्म फ्लप भए पनि निर्माताको लिस्टमा उनकै नाम। गज्जब छैन त?
आयुश्मानसँग पटक–पटक इन्गेजमेन्ट गरिन्। विवाह चाँडै गर्छु भनेपछि चालचुल छैन है ! तर विवाह पछिका श्रीमान् श्रीमतीका तस्बिरलाई पनि माथ खुवाउने तस्बिर आफैँ स्वाट्ट स्वाट्ट राखिरहन्छिन् सामाजिक सञ्जालमा। तैपनि उस्तै चार्म !
व्यक्तिगत सम्बन्ध होस् या सुन्दरता, मार्केटिङमा खप्पिस। मिडियाको साइकोलोजी मज्जाले बुझ्छिन्। कहाँ के ग-यो भने सबै मिडियामा छाइन्छ, मास्टर्स गरे बराबर छ।
त्यसैले त पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा च्वाप्पै लिप किस खाइदिन्छिन् प्रेमीलाई। भोलिपल्ट खतरा खतरा पुरस्कार पाउने सेलिब्रिटी हेरेको हे-यैं। उनीहरुको ठाउँमा प्रियंका पो छाएकी हुन्छिन् !
टिकट किनेर जो पनि सहभागी हुन पाउने कार्यक्रममा गए पनि पुरै आयोजकले मान सम्मानका साथ रेड कार्पेटमै हिँडाउन निमन्त्रणा गरेझैँ गरी हल्ला मच्चाउन उस्तै खप्पिस। पोल खुल्यो भने ला हो र मलाई त थाहै थिएन भन्यो, सक्कियो।
आयुष्मान फोटो खिच्न सौखिन, प्रियंका फोटोको। के चाहियो ? दुवै जना जहाँ पुग्यो, त्यहीँ फोटो सेसन। सेक्सिलो फोटो त गनिसाध्य भएन। इरोटिक मुडका तस्बिर खिचेर सार्वजनिक गर्न पनि हिच्किचाउँदिनन् उनी। अनि यस्ता यस्ता फोटा आएपछि अन्य सेलिब्रिटीले कसरी सक्नु उनलाई लाइमलाइटबाट हटाउन ! अब प्रतिस्पर्धी नै नभएपछि त जे गरे पनि नम्बर वन।
धन्न, अहिले प्रियंकाको ‘हाउ टु क्याप्चर लाइमलाइट’ भन्ने डायरी नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहले फेला पारे जस्तो छ। उनको इन्स्टाका पछिल्ला तस्बिर हेर्दा उनी बिस्तारै प्रियंकापथमा हिडिरहेझैँ देखिन्छ। दुवैलाई बेस्ट अफ लक !